ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 235
x x x မင်းကိုနိုင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ခဲတံချွန်ပြီးပြီ ကျောင်းသင်္ခန်းပုံ ဆွဲချင်ဆွဲ ၀စ်လစ်စလစ်ပုံ ဆွဲချင်ဆွဲ သဘောပဲလေ ဒီမြေမှာ ဓါးလှံတွေ ကြဲချင်ကြဲ ချိုးငှက်တွေ ၀ဲလိုဝဲ သဘောပဲလေ စိတ်ချ ကလေးရေ စစ်တိုက်ခန်းတွေ မကြိုက်လို့ ထိုးကြိတ်ခန်းတွေ မကြည့်လို့ သူရဲဘောကြောင်တယ် မစွပ်စွဲဘူး ဒါပေမယ့် ကလေးရေ ကိုယ်ဆွဲရာ ကိုယ့်ကားချပ် ကိုယ့်လက်မှတ်တော့ ထိုးရမယ် (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂) Ref – http://www.facebook.com/photo.php?fbid=301146083272786&set=a.125771214143608.32841.100001321914808&type=3&theater No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 235 of 235«1...231232233234235